होम आइसोलेसनमा बस्दा शरीरमा अक्सिजन घट्न थाले के गर्ने ? « Mero LifeStyle
सुमित्रा लुईंटेल	|| 12 May, 2021
दैनिकजसो कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेको छ । अस्पतालका बेड संक्रमितले भरिसकेका छन् । अक्सिजनको अभाव छ । त्यसो त अधिकांश संक्रमित यतिबेला घरमै बस्न बाध्य छन् ।
घरमै बस्दा अक्सिजनको कमी भएमा के गर्ने ? कुन औषधि खाने ? अक्सिजनको मात्रा बढाउने घरेलु उपाय के–के हुन् ? भन्ने बारे शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले दिएको सुझाव यस्तो छ :
अक्सिजन घटेको कसरी थाहा पाउने ?
सबैसँग पल्स अक्सिमिटर हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले अक्सिजनको मात्रा कति छ भनी बुझ्न गाह्रो हुन्छ । तैपनि शरीरमा देखिएका केही लक्षणका आधारमा शरीरमा अक्सिजन कम भएको थाहा पाउन सक्छौं । संक्रमण भएको पाँचौं र छैटौं दिनमा श्वास फेर्न गाह्रो हुनु, अप्ठेरो हुनु, शरीर सिथिल हुनु, श्वासको गति बढ्न थाल्यो भने अक्सिजनको कमी भयो भनेर थाहा पाउनुपर्छ ।
अक्सिजन कम भए घरमै के गर्ने ?
होम आइसोलेसनमा बस्दा अक्सिजन कम भएको महसुस हुनासाथ तत्काल घोप्टो परेर सुत्ने । यसले फोक्सोको क्षमता बढाई शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउन सहयोग गर्छ । यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भनिन्छ । त्यति गर्दा पनि गाह्रो भयो भने अस्पताल जानुपर्छ ।
अक्सिजनको कमी हुदाँ सुरुमा त घोप्टो परेर सुत्ने । घरमा अक्सिमिटर छ भने अक्सिजन को मात्रा नाप्ने छैन भने स्वास प्रस्वासको गति एकदमै तिव्र छ र सास फेर्न असहज भएको छ भने ‘स्टेरोइड’ नामक औषधि खान सकिन्छ । त्यसको साथै ‘प्रेडनिसोन’ ६ एमजी खाना पछि खान सकिन्छ ।
अक्सिजनको कमी हुन नदिन के गर्ने
– होम आइसोलेसनमा बस्दा श्वासप्रस्वासमा समस्या आयो सुत्दा असहज भयो भने घोप्टो परेर सुत्ने ।
– उत्तानो परेर नसुत्ने
– कोठाको झ्याल भेन्टिलेसन खोलेर हावा आवत–जावत गर्न सहज बनाउने ।
– माथि उल्लेख गरिएको औषधीहरुको सेवन गर्ने ।
औषधिको सेवनले पनि अक्सिजनको कमी भइरह्यो केही सुधार आएन भने वा असहजता बढ्दै गयो भने तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ । यदि अस्पतालमा बेड खाली छैन भने चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधिको सेवन गर्नुपर्छ ।